‘निगमलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउँछु’ – Rajdhani Daily
‘निगमलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउँछु’
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेले निगममा हुने भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने प्रतिब्धता जनाएका छन् । निगमको ४९औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘यसअघि जे जस्तो भए पनि अब निगममा भ्रष्टाचार शून्य हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने विकृति म हटाउन सक्छु र हटाउनेछु ।’
अब निगम हुने विकृतिलाई हटाउन खरो उत्रिएर काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘काममा खरो उत्रिएर कमीकजोरीलाई हटाउँदै अघि बढ्छु, निगम रिफर हुन्छ । निगममा सरकारको ठूलो लगानी रहेको छ । निगममा भएको सरकारको लगानी ढुब्न दिइनेछैन । यसैगरी, उपभोक्ता, निजी व्यवसायी र सबै कर्मचारीलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
यसैगरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगम कमिसन र भ्रष्टाचारले प्यालै प्वाल परेकोे बताएका छन् । विगतमा मन्त्री, सचिव, कार्यकारी निर्देशकदेखि व्यापारी र ट्यांकर चालकसमेत आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘नौ महिनादेखि विक्रेता विनियमावली बनाऊँ भनिरहेको छु तर अहिलेसम्म काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘समयमा काम नहुनुको कारण अनियमितता गर्न पाइँदैन
भन्ने हो ।’ मन्त्री यादवले भने, व्यवसायी र निगम कर्मचारीको आचरणमा सुधार हुनुपर्नेछ । यहाँ जनता, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्र र कर्मचारी सबैको लगानी छ ।’ सबैको लगानीको सम्मान गर्दै निगमको कामलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यक भएको बताए ।
दसैंताका निगम ४ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको तर अहिले निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मुल्य घट्दा घाटा घटिरहेको मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले भने अब केही दिनमा पूरै घाटा शून्यमा झर्छ र पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य अझै घट्नेछ । दसैं यता पेट्रोलियम पर्दाथमा प्रतिलिटर ६ मूल्य घटेको छ । उनले व्यवसायीलाई प्रश्न गर्दै भने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बस भाडा किन घटेको छैन ? पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घट्दा बसको ढुवानी भाडा पनि घट्नुपर्ने होइन ? बस भाडा घटाउनुपर्नेमा व्यवसायी पारदर्शी हुनुपर्दैन ?’ मन्त्री यादवले भने ।
निगमको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब
नेपाल आयल निगमले चुक्ता पुँजी ११ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) सुशील भट्टराईले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा हाल २९ करोड रहेको पुँजी बढाएर ११ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने बताए ।
निगमको चुक्ता पुँजी ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेर हरेक वर्ष बढाउँदै लगिने बताए । भट्टराईका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा थप ४ अर्ब पुँजी थप भई १५ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
निगमको केन्द्रीय कार्यालयसँगै प्रदेश कार्यालयको कारोबार पनि बढाउँदै लैजाने योजना रहेको भट्टराईले बताए । निगमका प्रदेश कार्यालयलाई ५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालयले रहेको बताए ।
Tags: ‘निगमलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउँछु’